यी ६ चिज घरमा राख्नाले, कहिल्यै हुँदैन धनको कमी ! ॐ लेखी एक शेयर गर्नोस – Sandesh Press
January 24, 2021 150
अधिकाँश परिवारमा कमाइ भएपनि घरमा धनको अभाव रहन्छ । घरमा पैसाको अभावले तनाव पैदा गर्छ । कतिपय ब्यक्तिलाई अत्याधिक मेहनत गर्दा पनि पैसा हात लाग्दैन ।
यस्तो वास्तु दोषका कारण हुने वास्तु शास्त्रको भनाइ छ । वास्तु शास्त्रका अनुसार घरमा केही बस्तुलाई राख्दा धनको अभाव हुँदैन । घरमा राख्नुस् यी ६ कुरा धनको अभाव हुँदैनः
१- माटोको घडा
२– घरको दक्षिण-
पश्चिम दिशामा पञ्चमुखी हनुमानको प्रतिमा वा तस्विर लगाउनुस् । यसको नित्य पुरा गर्दा घरमा पैसाको अभाव हुँदैन ।
६- वास्तु शास्त्रमा घरमा शुभ उर्जा पैदा गर्नका लागि धातुले बनेको कछुवा वा माछा राख्नु राम्रो मानिन्छ । यसले घरमा आर्थिक अभाव हुन दिँदैन ।अत्यन्त परिश्रम र मेहनतका बावजुद पनि कुनै काममा सफलता पाइरहनु भएको छैन भने केहि दोष हुनसक्छ ।जीवनमा आर्थिक समस्या आइरहेको छ वा रोकिएको धन फिर्ता भएको छैन भने राशी अनुसारको केहि उपाय गरेमा यो समस्या हटेर जाने धार्मीक मान्यता छ ।
Prevमुख्‍यमन्त्री राईको विवाहमा शुभकामना दिन पुगिन् राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी
Nextतपाईका जिवनमा आईपरेका संकटहरू हटाउन कुन राशिका व्यक्तिले के गर्ने?
श्रीमानले यति राम्रो छोरीलाई समाप्त गरेपछि श्रीमानको कर्तुत यस्तो थियो भन्दै, रुदै आइन आमा मिडियामा